Idzo nomwe zvipo zvakanakisa zvinounzwa nevarume Vatatu Vakachenjera | Ehupfumi Zvemari
Rimwezve gore SSMM yavo Varume Vatatu Vakangwara vachashanyirawo vashoma nevari pakati varimi muna Ndira 6. Gore rino, kupfuura nakare kose, zvaunoda zvichave zvakawandisa kuitira kuti kuchengetedza kwako kubatsire kupfuura iro gore rapera. Iko kunowanikwa index yenyika, iyo Ibex 35, yakadzikira kwakatenderedza 11%. Chinhu icho munhu wese anoda kudzokororwa nekuti chingave chiratidzo cheizvo zvido zveavo vakatorasikirwa nemari yakawanda mumwedzi yapfuura.
Semhedzisiro yemaitiro aya, hapazove neimwe sarudzo kunze kwekuti Vatatu Vakachenjera vachengetedze nhevedzano yezvishuwo zvatinazvo zvegore idzva rekutengesa. Beyond vamwe zvekufunga nezvehunyanzvi mune makuru epasi rese masheya indices. Zvinozoenderana navo kuti pakupera kwegore rino bhalanzi redu muaccount account rinenge riine simba rekutungamira hupenyu hwakanaka kubva ikozvino. Kuburikidza nemazano akatiwandei atinozokutsanangurira pazasi uye kuti ivo Magi vanogona kutora, kwete pasina kuedza kwavari.
Chirevo chekutanga chichava pamusoro pekuwedzera kwemitero iri kuitiswa nenzira inodzorwa uye kure nekushamisika kupi kungaite kurasikirwa mune yako portfolio. Mupfungwa iyi, chishuwo chekuti iwe unofanirwa kuita mutsamba yako yeumambo chinofanira kuyeuka ichi chishuwo chinodiwa kune vese varairidzi munyika medu. Hazvina kuoma kuti chishuwo ichi chizadziswe mumwedzi gumi nemiviri inotevera sezvo ichi chiri icho chinangwa cheEuropean Central Bank (ECB), sezvakataurwa mumataurirwo achangoburwa nemutungamiriri waro, Mario Draghi.
1 Chechipiri chezvipo: kudzikama muEngland
2 Chipo Chechitatu: Trade War Fix
3 Chipo chechina: bhizinesi mabhenefiti
4 Chechipiri chipo: kusavapo kwehondo dzehondo
5 Chipo chechitanhatu: tora uptrend
6 Chipo chechinomwe: kurova zano
Chechipiri chezvipo: kudzikama muEngland
Chimwe chezvinhu chinogona kunyanya kukuvadza vashoma uye varipakati varimi inzira yakaoma muchikamu chino chekondinendi yakare uye inotorwa kubva ku Brexit. Mupfungwa iyi, hapana zvirinani kupfuura nhaurirano pakati pemapato ese ari maviri dzinovandudzwa pasi pekudzivirira kwavo zvido. Chinhu chinonyanya kukosha kumisika yemakambani kuti idzokere munzira yechinyakare. Ehe, kupindira kwevezvematongerwo enyika iyo ingangoita nguva dzose inotungamira mukuderera mumusika wemasheya. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Chipo Chechitatu: Trade War Fix
Hapana mubvunzo kuti hondo yekutengeserana iri pakati United States neChina yanga ichirema misika yemari. Sezvakaitika semester yekupedzisira yegore rapfuura. Nhau dzakanaka mune ino pfungwa dzinofanirwa kuunganidzwa pamwe nekuwedzera mumisika yemasheya kutenderera pasirese uye pamwe nesimba guru. Kusvika padanho rekuti inogona kutora misika yemasheya kumatanho asingaonekwe mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira uye kuti inogona kushandiswa kuburikidza nemasheya ane hukasha zvikuru ayo achazove anoita zvakanakisa mumisika yemari. Nekukwikwidza kwakakodzera kubva kunzvimbo dzese dzekuona.
Chipo chechina: bhizinesi mabhenefiti
Mhedzisiro yekota yemakambani akanyorwa anozoita sarudzo mukupa kwakasimba kukosheswa kwemitengo yavo. Naizvozvo, zvichave zvakakosha kuti purofiti yebhizimusi inogona kukwidziridzwa kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe iri yemamwe mashoma mashoma margins zvine chekuita nemakore apfuura. Ichi chinhu chichava chezvekuwedzera kutyaira kukura mune huru misika yemasheya indices munyika. Nekuti pakupera kwezuva zvazviri ndezvekuti iyo economic growth ramba wakamira munzvimbo dzese dzehupenyu hwebhizinesi. Hazvishamise kuti zvicharatidzirwa mukuwedzera kwemutengo wemasheya ayo.
Chechipiri chipo: kusavapo kwehondo dzehondo
Hapana mubvunzo kuti hondo dziri kutengesa pasi mumisika yemari sezvinoonekwa mumakore achangopfuura. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zviitiko zvehondo zvinoonekwa nekusavapo kwavo. Iko kumwe kunopesana zvakanyanya uye nemhedzisiro yakakomba pane equities ndiyo inogona kutarisana neRussia neUkraine. Hazvishamise kuti zviitiko izvi zvaizove nechiratidziro chakanangana nekuderera kwemutengo wezvikamu. Imwe yenyaya dzakanakisa dzinogona kugadzirwa mugore idzva rekutengesa nderekuti zviitiko izvi hazvina kuitika chero zvodini.
Chipo chechitanhatu: tora uptrend
Chero zvazvingaitika, nhau dzakanakisa idzo dzevashambadziri vadiki nepakati vanogona kuva nenguva ino ndeyekuti musika wemasheya zvakajairika, kana zvimwe zviyero, inogona kupinda mukutengesa kwakasimba. Nezve yekutanga, yakaoma kwazvo kuti inogona kuverengerwa, asi zvinopesana, zvikumbiro zvechipiri zvine chokwadi chekuti uchavaona mumwedzi inotevera. Nekuti sekutaura kunoita vatengesi neruzivo rwakawanda mikana chaiyo yebhizinesi inogara ichigadzirwa mumisika yemari. Kunge nhau huru kuti kuchengetedza kwacho kubatsire.
Chipo chechinomwe: kurova zano
Uye seiri zano rekupedzisira kuti ubudirire kuvandudza kudyara mari mune ino kosi, zvinhu zvemo hazvigone kukanganwika. Pakati pavo, chimwe chezvinyanya kukosha ndechekuti iwe hauite zvikanganiso kana uchiumba yako inotevera yekudyara portfolio. Kuzadzikisa ichi chakakosha chinodikanwa, iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekuve Akarangwa kwazvo nehunyanzvi hwauchazotora kuti usarudze machengetedzo akanyorwa pamisika yemari. Iine ongororo yakadzama pamusoro pekushanduka kwenzvimbo dzepasi rose misika.
Sezvaungave iwe wakaona, nekudaro, hazvina kunyanya kuomarara zvinodiwa kuti usangane uye kana zvikasangana uchave nemubairo wako wakakodzera. Uine purofiti iwe yaunogona nani kuburikidza neimwe kirasi yezvigadzirwa zvemari. Kuburikidza nemazano mazhinji ekudyara uye emhando dzakasiyana, sezvazviri chinangwa chako chiriporipo chegore rino sezvo kuri pakupera kwezuva iro rudzi urwu rwekushanda mumisika yezvemari inobatanidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvipo zvinomwe zvakanakisa izvo Magi anogona kuunza kune vanoita mari
6 zvinhu zvinowanisa musika wekutengesa mu2019